Xeerka Kufsigu Miyuu Xalaalaynayaa Khamriga? Q. 2aad | Hangool News
October 7, 2018 - Written by Hangool News 1
waxa isku ciqaab ah ninka nin kufsada iyo ninka gabadh kufsada, ee isku si u kufsada! Waxa isku ciqaab ah ninka oday awoow ah kufsada iyo ninka kufsada nin dhallinyar ah ee isku si u kufsada! Waxa isku ciqaab ah ninka habar ayeeyo ah kufsada iyo ninka gabadh dhallinyar ah kufsada! Waxa isku ciqaab ah ninka Suldaan reer kufsada iyo ninka qof iska caadi ah kufsada! Ma uu kala saarin xeerku dadkan kala duduwan. Kaliya waxa uu kala saaray uun carruurta wixii 15 ka yar oo haddii isku si loo kufsado ciqaabtoodu ay siman tahay iyo wixii 15 ka weyn oo haddii isku si loo kufsado ay ciqaabtoodu siman tahay. Qaybtan dambe waxa soo galaya dhammaan dadka aan xagga hore ku sheegay ee waayeel iyo wax-garadba leh!